Al-shabaab yaa la dirirsan? Yeyse dan u yihiin? - Q.2aad
Maqaalkan qaybtiisii hore waxan ku soo xusay tilmaamo kooban oo ku saabsan Al-shabaab, kaalintooda iyo mawaaqiftooda oo dhinac ah iyo cidaha la dirirsan oo dhinac ah. Cidaha la dirirsan waxan ku soo koobay A) quruumaha islaam la dirirka ah iyo adeegayaashooda faraha badan oo ay xiitaa ka mid yihiin soomaali noocyo badan. B) Urur-diimeedyada islaamiga ah ee Soomaaliyeed ee kale.
Qolada koowaad waan ka soo tilaamay wax habayaraatee. Qolada labaaadna waxan ka leeyahay:
Urur-diimeedyada islaamiga ah ee kale
Urur-diimeedyada kale ee diidan Al-shabaab waxay ku diidanyihiin ee ugu wayn ee la sheegi karaa waa tartan xagga awoodda iyo hoggaanka ah. Ma jiro wax faraq-diineed ah oo u dhexeeya oo la sheegi karo. Khilaafka keli ah ee jiri karaa waa; Yaa lagu daba-faylayaa? Marka la eego sida cadowgoodu isu bahaysanayo, uguna midboobayo la dirirkooda, waad la fajacaysaa isu tanaasul la´aantooda. Waa murugo eh, waxa meeshan loo baahanyey cilmi-baadhis, lafa gur iyo faallayn xooggan oo ay u soo banbaxaan kaadiriin ku baraarugsan marxaladda la marayo. Waxaase ka sii muhiimsan in ay u soo banbaxaan guurti xallisa is maandhaafka yaal ”inta aan talo faro-ka-haadin”. Miyaan taariikhda waxba laga baranahaynin? Miyaan mujaahidiintii reer Afgaanistaan meesha tacabkoodi ku dambeeyey inoo sii muuqan? Haddii fagaaraha dagaalka Soomaaliya ay ka jireen Al-shabaab oo lahaa hoggaan habaysan, maxaa looga baahanyey in jabhad kale laga garab furo? Waxa la doonayaa ma ”i arkaay i maqlaay” baa iyo in taariikh gaar ah la samaysto? Ma magac kooxeed ayaa mudan in walaalnimo iyo hiilba la isku siiyo mise alle dartii? Allaahu akbar, wallee waxa cagta la saaray waddadii madoobayd (akhri buugga: dumar talo ma laga deyey?)
Yey dan u yihiin dhaqdhaqaaqa Al-shabaab?
Su´aashan jawaabteeda waa mid aan ku boorrinayo qof kasta oo akhriyaaba in uu gaar uga fekero. Kow-kow iyo koox-kooxba uga fekera jawaabta. Anigu waan ka fekeray, fikiri badan iyo faallona way ii laabantahay. Waxaanse hadda leeyahay; dhaqdhaqaani wuxu dan u yahay umadda soomaaliyeed, umadda islaamka iyo guud ahaanba shucuubta la daciifsaday ee adduunka. Waayo dheh?
Dee dagaalka lagu soo qaaday Soomaaliya wuxu ahaa mid ay soo qorsheeyeen oo maalgasheen qowadaha reer galbeedka, kuwaas oo raba in ay umadaha adduunku sii ahaadaan qaar aan iyaga ka xor ahayn oo taag daran. Ujeedada fogina waa in boqolaalka sano ee soo socda ay carruurtoodu nabadgelyo ku helaan dhulalkooda, dhulalka kalena looga aqoonsanaado boqorro oo looga soo hadyadeeyo khayraadka adduunka oo dhan, iyaga oo ka qatan kuwa soo hadyadeeyey.
Ujeedadoodaas fog waxa ay ku gaadhi karaan, in ay isla imikaba ka helaan meel kasta dad u sujuudsan, dhaqankooda iyo sarrayntoodana cabsan. Haddii ay waayaan qaar u sujuudsan waa in ay helaan qaar u rukuucsan. Haddii ay kuwaas waayaanna waxa ay adeegsanayaan ”xoog iyo xadiid” si ay shacbiga dhan u ogolaysiiyaan u rukuucsanaantooda. Shaki kuma jiro in ay jiraan dad badan oo u rukuucsan iyo xiitaa qaar u sujuudsan quruumhaas gumaysidoonka ah. Tusaaleyaal badan in aan soo qaato kama gaadho hadda. Laakiin Al-shabaab waa ay diideen in ay u rukuucaan cid aan Ilaahay ahayn. Iskaba daah quruumaha gumaysi-doonka ah warkooda eh. Taas waxa aad ka garan kartaa sida cadowga soo duulay iyo xulafadoodu ay u necebyihiin. Haddii cadowgii umaddu u arko khatar Al-shabaab, maxaa lagu macnayn karaa?, haaa, taas waxa lagu macnayn karaa in jiritaanka Al-shabaab aanay dan u ahayn quruumaha duullaanka ah, taas oo la macno ah in ay dan u yihiin umadda lagu soo duulay.
Taas waxa markhaati u ah meesha ay ka soo qaadeen karaamadii umadda markii dalka la qabsaday. Markii cabsi lala wada dhuuntay sow al-shabaab ma ahayn kuwa laabtooda xabbadda u furay ee inagu siman in aan dib isu abaabuli karno? Taas yaan loo qaadan in aan duudsiyayo dadkii ee culimo iyo caamaba lahaa. Xaasha. Waxaanse leeyahay; illeen umaddu hogaan ayey u baahantay sow hoggaanka Al-shabaab ma aha kuwa umadda geesinimo geliyey?
Sidaas oo kale ayey dan ugu yihiin umadaha islaamka ee uu dhulalkooda ku dhabanaaniyey duulaanka caalamiga ahi. Isla sidaas oo kale ayey dan ugu yihiin shucuubta caalamka ee ay saarantahay heeryada gumaysiga, iyaga oo cashar ahaan u qaadanaya in naf hurnimo iyo haladayg loogu babac dhigi karo awoodo kaa tiro iyo hub badan.
Talo guud oo ku socota bulsho weynta Soomaaliyeed
Umadda Soomaaliyeed waxa aan u oo jeedinayaa in ay si fiican u fahmaan dhinaca wax u socdaan. Waa in la fahmo waxa la isku haysto. Waa in taariikhda dib loo eego. Iyada oo ay tahay in ciddii qalad leh aan lagala gabban, waxanan taladaas u faahfaahinayaa sidatan soo socota:
Waa in la xasuusnaado dagaalka Soomaaliya ka socdaa inuu yahay mid ku dhisan mabaadi oo la isku haysto; hirgelinta shareecada islaamka iyo hakinteeda ama aan idhaahdo hirgelinta mabaadiida beesha caalamka iyo hakintooda. Qofkii aaminsan mabaadiida beesha caalamka, yaanu isku mushquulin gobanimo doon, maxaa yeelay beesha caalamku iyaga ayaa u tashaday Soomaaliya, waxaanay u wakiisheen Itoobiya. Qofkii beesha caalamka aaminsani waa in uu ka mid noqdo adeegayaasha ciidamada Itoobiya iyo kooxda Imbigaati. Qofkiise aaminsan in shareecada islaamku hana-qaaddo waa in uu muruqiisa iyo maalkiisa iyo maankiisaba ku biiriyo dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ee afkaartaas xambaarsan. Dagaalka socdaa qabiil maaha, mid qoomiyadeedna maaha ee waa mid mabda´ ah.
Waa in si wanaagsan loo fahmo in xalka soomaaliya uu hadda ka fogaaday dhinaca diblomaasiyadda. Natiijo kasta oo ka soo baxda dadaal dublamaasiyadeedna wuxu noqonayaa guul u soo hoyatay beesha caalamka ee islaamka la dirirsan iyo guuldarro u soo hayatay umadda soomaaliyeed ee rabta in shareecada islaamka lagu dhaqmo.? Taas ugama jeedo in aan qaddiyaddeen loo soo bandhigin adduunka. Waa xaq in faddeexadda ka socota dhulka Soomaalida daaha laga qaado. Xasuuqa iyo shirqoollada is dabayaal, waa in goob walba lagala oogsado, si xujo loogu oogo shucuubta caalamka. Laakiin dadka hawshaas u kacayaa waa in ay ahaadaan uun qaar wacyiga shucuubta caalamka wax ka bedela oo ”opinion makers” ah ee ayna noqon ”dicission makers”. Meesha la isku haystaa waa dhulkaagii dadka la xasuuqayaana waa dadkaagii.
Dagaalka lagu soo qaaday Soomaaliya wuxu ahaa mid ay soo qorsheeyeen oo maalgasheen qowadaha reer galbeedka, kuwaas oo raba in ay umadaha adduunku sii ahaadaan qaar aan iyaga ka xor ahayn oo taag daran. Ujeedada fogina waa in boqolaalka sano ee soo socda ay carruurtoodu nabadgelyo ku helaan dhulalkooda, dhulalka kalena looga aqoonsanaado boqorro oo looga soo hadyadeeyo khayraadka adduunka oo dhan, iyaga oo ka qatan kuwa soo hadyadeeyey.
Waa in la xasuusnaado dadkii iyo kooxihii u babac dhigay duulaankan ee nafahoodii qaaliga ahaa u hibeeyey si ay u hakiyaan damaca quruumaha gumaysidoonka ah ee islaam la dirirka ah. Waa in la xasuusnaado ragga inagu simayn in dib la isu abaabuli karo, oo aan laga abaal dhicin. Yeynaan noqon sidii Ehelu-naarkii qoloba qoladii ka horraysay nacdali jirtay.
Waa in la xasuusnaado quruumaha gumaysi-doonka ah iyo kuwa islaam la dirirka ahiba in ay ahaatan, ka quusteen guushii ay bilowgii ku faanayeen. Sida keli ah ee ay ku fashilin karaan halganka dib u xorayntana waa in la iska horkeeno xooggaga wax iska caabinta ee culimadu hoggaaminayso. Arrintaasna way galeen tacabkeedii, waanay ku dhawyihiin in ay ku guulaystaan kol haddii ay maantaba jiraan ilaa saddex ciidan oo si kala gooni ah u hawl gala. Arintani waa mid murugo lehe, waa in dhakhso loogu kaco ”inta aanay talo faro ka haadin”. Shaxda cadowgu way iska caddahay, waxayna tahay: ”ninka ba´an ee walaalkaa ah dil si aan kuu amaan siiyo”.
Waa in la xasuusto in labadii qarni ee u dambaysay ay Itoobiya u soo siqaysay dhinaca xeebaha Soomaalida, guushuna u dambaynaysay Itoobiyaanka. Taas waxa sababayey iyaga oo ku dagaallamayey ”mabda´ adag” isla markaana haystay hiilka walaalahooda Kiristaanka, halka umaddeenu aanay lahayn qorshe lagu talo galay iyo hiil walaal toona.
Waa in maanka lagu hayo, haddii ay Itoobiya u suurogashay in ay 100 sano ka hor qabsatay magaalada Harar, maantana ay is le´egyihiin Masaajidada iyo kiniisadaha Harar, in Xamarna ay sii haysan karaan, masaajidada Xamar iyo kiniisadaha mustaqbalkuna is le´egaan karaan 100 sano ka dib. Waa in aan fekerno wixii u suurageliyey guusha ay Harar ku xalaashadeen, si aanay Xamarna ugu xalaashan.
Dhaqdhaqaaq Al-shabaab waxan iyagana ku leeyahay:
Horta waad ku saxsanaydeen in aad qaaddacdeen shirkii Asmara, maxaa yeelay waxaa qayb ka ahaa, kuwii dalbaday ciidamada dalka lagu qabsaday oo aan welina ka toobad keenin xeerkii ay cadowga ugu jideeyeen xurmo-tiridda umadda islaamka ah ee soomaaliyeed.
Waad ku saxsanaydeen in aad qaaddacdeen shirka Asmara maxaa yeelay; waxa ka qayb ahaa kuwii yidhi; dayaaradaha Maraykanku qasaaraha ay gaysanayaan waa yaryahay ee waa in ciidamada dhulka ee Maraykanku noo yimaaddaan, si ay u ugaadhsadaan islaamiyiinta. Welina maynu maqal toobad keen arinkaas ku saabsan.
Waad ku saxsanaydeen in aad qaaddacdaan shirkii Asmara, maxaa yeelay wuxu kulminayey dad afkaarta ku kala tagsan oo qaarkood aanay duwanayn kooxda Imbigaati.
Waad ku saxsanaydeen in aad qaaddacdeen maxaa yeelay wuxu u eegaa meel ay ku soo dhuuman karaan beesha caalamku si ay dagaalka ugu beddelaan mid u dhexeeya xaq u dirirka islaamiyiinta ah ee soomaaliyeed.
Waad ku saxsanaydeen in aad qaaddacdaan shirka Asmara, maxaa yeelay waxad ka baqdeen in uu aakhirka sababo; ciidamada dalka qabsaday oo qaarna ka baxaan qaarna iyaga oo sharci ah hadhaan, kooxda Imibigaatina ay dalka u hadho, muqaawamaduna noqoto mucaarad aan hubaysnayn, oo aakhirka mabaadidooda xididada loo siibo.
Waxaadse ku qaldantihiin in aad beri ka noqotaan walaaladiina shirkaas ka qaybgalay ee aad qaarkood wax walba ka simantihiin. Qaarkoodna ayba noqden astaamo umaddu ku xisaabtanto.
Waxad ku qaldantihiin in aad far waaweyn ku qortaan faahfaahinta mabaadidiina mustaqbalka fog. Uma baahnidin in aad shacabka Soomaaliyeed far waaweyn wax ugu qortaan waayo? Waxa ku filan; ku dhaqanka Shareecada islaamka ayaanu rabnaa, cadowga soo duulayna waa la jihaadahaynaa. Faahfaahinta intaas ka badani caamada uma wanaagsana, dadkana waxa lagula hadlaa inta uu leegyahay wacyigoodu. Waxa ka faa´iidaysanaya adeegayaasha cadowga ee iska dhigaya qaar kula safan.
Waxad ku qaldantihiin in aad reer galbeedka far waaweyn wax ugu qortaan. Maxaa yeelay waxa ku filan ku dhaqanka shareecada islaamka ayanu rabnaa. Halkaas ayey ka garanayaan faahfaahinta mabaadidiina mustaqbalka fog, iyo in aad odhan doontaan: Ma ogolin mabaadiida qaramada midoowbay, ma ictiraafsanin xuduudaha lagu kala qoqobay umadda islaamka ah iyo in alla inta qof islaam ah la gumaysanayo hawshu way soconaysaa. Qof kasta oo sheegta in uu shareecada islaamka dhaqan gelin doono-na isku doon ayaad saarantihiin, xiitaa haddii uu sheegto in uu qunyar socodyahay.
Waa in aad ka shaqaysaan midaynta safka halganka, iskuna daydaan in aad u tanaasushaan cid kasta oo aad diintooda ku kalsoontihiin, xiitaa haddii ay iyagu idiin tanaasuli waayaan.
Walaalayaal waxa aan ku qoray maqaalkan, ugama jeedo wax hagaajin mooyaane. Waxaanan qoray wax wadnahayga ka soo baxay oo aan ku saleeyey aqoontayda iyo aragtidayda. Haddii la i tuso qaldanaanta wax ka mid ah waxa aan qoray oo aan ku qanco qaldanaantiisa, waxan uga laabanayaa ilaahay dartii.
Dhammaan walaalaha akhriya maqaalkanna waxan ka codsanayaa in aanay ku akhriyin indho-colaadeed ama kaljeclaan. Ha ku akhriyaan indho xaqiiqo raadis ah. Iska fura okiyaalaha iyo xarka suurta-galka ah:
ee jacaylka xarako ama nacaybka mid kale
aaminsanaanta nadaam caalami ah
iyo xogaha aad ku hesheen si ”qiila wa qaala ah”